Ilay Caribbean United any St.Vincent miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika no mitarika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ilay Caribbean United any St.Vincent miaraka amin'ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika no mitarika
Tiako ireo Nosy Karaiba ireo, hoy ny praiminisitra St.Vincent Ralph Everard Gonsalves taorian'ny nanafihan'ny volkano ny nosy ny herinandro lasa teo. Miaraka ny Nosy Karaiba ary ny minisitry ny fizahantany any Jamaika no eo amin'ny toeran'ny mpamily.
Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon Edmund Bartlett, dia miantso ireo mpitarika fizahan-tany any amin'ny faritra mba hivory hiady hevitra momba ny fiantraikan'ny fipoahana volkano tato ho ato ao amin'ny nosy St. Vincent sy ny Grenadines (SVG) izay any atsinanan'i Karaiba.
Mponina an'arivony maro no natory tao amin'ny toeram-pialofana vonjy maika nanomboka ny zoma [9 aprily 2021] taorian'ny famindrana. Ireo mpiasan'ny vonjy taitra dia namaritra ny tontolo ho toy ny "faritra misy ady" ary nilaza fa maro ny fahasimbana sy ny fandravana azo inoana
Ny filankevitra momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny fizotran'ny fanentanana ny SVG amin'ny alàlan'ny tambajotra iraisan'ny mpiara-miasa aminy.
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika Edmund Bartlett dia nilaza fa: "Ny fanakorontanana an'io habe io dia mitaky fifanakalozan-kevitra maika amin'ireo mpitondra fizahan-tany isam-paritany mba hijerena ny fiantraikan'ny fizahan-tany any Karaiba noho ny fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainana, ny fivelomana ary ny fizahantany amin'ny farany", hoy ny minisitra Bartlett.
St. Vincent sy ny praiminisitra Grenadines, Dr Ralph Gonsalves, dia nandidy ny famindrana ny faritra mena ny alakamisy ary nipoaka ny volkano La Soufriere ny zoma.
“Amin'ny andraikitro amin'ny maha Filohan'ny fikambanana miasa amerikana amerikana avo lenta ahy, dia nifandray tamin'ny United Nations World Tourism Organisation sy ny World Travel and Tourism Council momba ny fanalefahana fohy sy fohy aho.
Izahay koa dia eo am-panentanana ny fanohanana ny SVG amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany amin'ny tambajotra iraisam-pirenena, "hoy ny minisitra Bartlett.
Mirotsaka ny fanohanana an'i St.Vincent sy ny Grenadines satria ny fianakaviana dia mitantana hatrany ny voka-dratsin'ny volkano. Ny trano manerana ny nosy, izay misy mponina manodidina ny 110,000, dia rakotra vovoka volkano sy vatokely misy fotsy.
"Ny fotoana hiasa dia izao handrafetana ny làlana mandroso ao anatin'izany ny fananganana faharetana mba hatanjaka kokoa sy hiroborobo, ary eto no ahafahan'ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center", hoy ny minisitra Bartlett.
Ny Tale Mpanatanteraky ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy, Profesora Lloyd Waller, dia nilaza ihany koa fa: "Ireo fanakorontanana ireo dia tsy vaovao ary toa mitranga haingana kokoa miaraka amin'ny voka-dratsy lehibe kokoa. Mila miara-miasa amin'ny làlana mandroso isika, indrindra fa faritra miankina amin'ny fizahan-tany. "
Profesora Lloyd Waller, Tale Mpanatanteraka, GTRMC
Ny Commuter Train vaovao any Taiwan dia misy ifandraisany kely amin'i Alemana miaraka amin'i TUV Rheinland